फोटो सिन्धुलीका लागि फोटो आह्वान :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
किनलोकको नेतृत्वमा आएको बेलायती फौजलाई वि.सं. १८२४ असोज १५ गते गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढी किल्लामा पराजित गरेका थिए। यसै विजय दिवसको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डको फोटोनेपालबाट फोटो सिन्धुली प्रदर्शनी गर्ने भएको छ।
आगामी असोज ११ देखि १७ सम्म हुने उक्त कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्ड, कमलामाई नगरपालिका, समृद्ध सिन्धुली अभियान, स्टोरी साइकल, रोटराक्ट क्लव अफ सिन्धुलीगढी सिन्धुली साईकल क्लवको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य विविध जातजाति, पर्यटकीय स्थल, कृषि उत्पादनलाई जोड्दै सिन्धुलीको पर्यटन प्रवर्धन गर्नु रहेको छ।
सिन्धुलीमा हरिहरपुरगढी, सिन्धुलीगढी, फिक्कल, आदिलिंग कुशेश्वर महादेव, सिद्धबाबा, पञ्चकन्या पोखरी, सुनकोशी, ठाकुर राजाको दरबार, महाभारत, चुरे, माइस्थान, मधुगंगा महादेव, सर्वसिद्धेश्वर गुफा, महाकाली देवी, बैष्णवी मन्दिर, शहश्रधारा गुफालगायत दर्जनौं पर्यटकीय स्थल छन्।
अल्पसंख्यक हायु, थामी, पहरी मात्र होइन दनुवारलगायत विविध जातजातिको बसोबास समेत सिन्धुलीमा छ। यसर्थ, कृषि उत्पादनलाई जोड्दै सिन्धुलीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन्। तिनै सम्भावनाको खोजी हो, फोटो सिन्धुली।
नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले सिन्धुली जिल्ला आफैंमा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको र यसको प्रचारप्रसारका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित आयोजना गरीरहेको #फोटो नेपाल अन्तर्गत यो अभियान अघि सारेको बताए। उनले यस अभियानमा फोटो पठाई सहभागी हुन सबैमा अनुरोध समेत गरे।
सिन्धुली जिल्लालाई पहिचान दिलाउने फोटोहरु सङ्कलनका लागि अनलाइन आह्वान गरिएको छ। यसरी सङ्कलन भएका फोटोहरु नै फोटो सिन्धुली प्रदर्शनीमा समावेश गरिनेछन्।
सिन्धुलीलाई पहिचान दिने ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलहरू, सिन्धुलीलाई चिनाउने पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, विभिन्न जातजातिका भेषभूषा, संस्कृतिलगायत सिन्धुलीका रमणीय दृष्यावलोकन गर्न सकिने पर्यटकीय स्थलहरुका फोटाहरू पठाउने फोटोग्राफरलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरिने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ।
फोटो पठाउँदा ध्यान दिनु पर्ने महत्वपुर्ण निर्देशिका
तस्बिर आफैंले खिचेको कम्तिमा एकातर्फ २००० px (Pixel) @ dpi (dot per inch) ३०० भएको तस्बिर पठाउनु पर्नेछ।
फोटो खिच्दाको कथासमेत सँगै सामेल गरेर पठाउनुपर्ने छ ।
तस्बिरसँगैं त्यसको विवरण (caption) समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
तस्बिरमा खिच्नेको नाम उल्लेख हुनेछ । तस्बिर अन्यत्रसमेत प्रयोग गर्न सकिने छ । तस्बिरको कपीराइट(copyright) फोटोग्राफरसँगै हुनेछ । प्रयोग गर्ने अधिकार भने आयोजकसँग सुरक्षित हुनेछ ।
तस्बिर छनौटको अन्तिम अधिकार आयोजकसँग हुनेछ ।
छनौट नभएका तस्बिर पनि अन्यत्र प्रयोग गर्न आयोजकलाई अधिकार हुनेछ ।
अरुले खिचेको तस्बिर पठाउनेहरुले वास्तविक फोटो ग्राफरको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने छ । कसैले पठाएको तस्बिर अर्को ब्यक्तिले आफ्नो भएको दावी गरे त्यसको जिम्मेवार तस्बिर पठाउने ब्यक्ति स्वयं हुने छ ।
फोटो http://photo.ntb.gov.np वा https://forms.gle/LTyeNtUMD8nhtwHM8 वा sushil@storycycle.com बाट २०७८ साल असोज १० गतेसम्म पठाइसक्नु पर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ६, २०७८, ०१:४७:००